Fibatana fonjam-by: nahazo medaly volamena telo ny vehivavy | NewsMada
Fibatana fonjam-by: nahazo medaly volamena telo ny vehivavy
Nanomboka omaly tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny faritra faha-3, eo amin’ny fibatana fonjam-by. Be fiavy ny Malagasy, teo amin’ity andro voalohany ity, satria avy hatrany dia nandrombaka medaly volamena telo sy volafotsy iray, ny vehivavy.
Anisan’ireny, Randafiarison Rosina, sokajy «sénior» 45 kg, nahabata 65 kg teo amin’ny “arraché”, ary 85 kg kosa teo amin’ny «epaulet jetté». 156 kg ny totaliny. Marihina fa tsy nisy mpifanandrina izy tamin’io sokajy io. Toy izany koa ny teo amin’ny «sénior» 49 kg, nakan’Andriamintatsoa Sabrina Ny Hasina ny medaly volamena. Nahabata 60 kg izy teo amin’ny «arraché», ary 80 kg «epaulet jetté». Ny medaly volamena fahatelo kosa, azon’i Angeline Nera Sarah, teo amin’ny «sénior», 59 kg. Teo amin’ny «arraché» 65 kg no vitany, ary 80 kg «epaulet jetté».
Nanjakan-dRanaivosoa Marie Hanitra, teratany malagasy mizaka ny zom-pirenena maorisianina, ny teo amin’ny “senior” 55 kg. Lasany ny medaly volamena, rehefa nahabata, 78 kg, teo amin’ny “arraché” ary 98 kg “epaulet jetté”.